यसै गा.पा. काे आयोजनामा राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ कार्यक्रममा उत्कृष्ट अभिभावक सम्मान कार्यक्रम २०७७ अन्तर्गत, गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यू र उपाध्यक्ष श्री बेचनी कुमारी सरदार ज्यूले उहाँहरूलाई सम्मान पत्र सहित दाेसला ओढाएर सम्मानित गरि साे कार्यक | रुपनी गाउँपालिका
योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा पुन: ताकेता गरिएको
आगामी आ.व. २०७८/०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण सम्बन्धि सूचना।
विद्यालयहरुमा गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा सूचना।
५०% अनुदानमा प्लाप्टिक चार्जर स्प्रेयर वितरण कार्यक्रममा छनौट भएका लाभग्राहिहरुका लिष्ट सम्बन्धमा।
च्याफ कटर मेसिन ५०% अनुदानमा वितरण सम्बन्धि सूचना।
समता फाउण्डेशनले १८–३० वर्षका दलित युवती छनौट गरी उनीहरूलाई विषयगत विज्ञहरूबाट तालिम दिइने भएकाले इच्छुक दलित युवतीहरुले तलको आवेदन फारम भरेर फाल्गुन २० गते भित्र बुझाउन अनुरोध गर्दछौं । फारम भर्ने link- https://tinyurl.com/i1wd56ly सम्पर्क-९८४४३३२७५१
६ वटै वडाहरु सामाजिक सुरक्षा तथा बालपोषण भत्ता पाउने लाभग्राहिहरु भरपाई प्रतिवेदन प्रकाशित सम्बन्धि सूचना।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि निवेदन फोरमेट
व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन गर्न ईच्छुकहरुको लागि सूचना।
Home » यसै गा.पा. काे आयोजनामा राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ कार्यक्रममा उत्कृष्ट अभिभावक सम्मान कार्यक्रम २०७७ अन्तर्गत, गा.पा. अध्यक्ष श्री हरेराम यादव ज्यू र उपाध्यक्ष श्री बेचनी कुमारी सरदार ज्यूले उहाँहरूलाई सम्मान पत्र सहित दाेसला ओढाएर सम्मानित गरि साे कार्यक
Submitted on: Tue, 06/30/2020 - 16:33